ညီလင်းသစ်: တောင်ခြေရွာကလေးသို့ (၂) ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.5.11
ကော်ဖီကောင်းကောင်းသောက်ခဲ့ရလို့။ ဒီအရွယ် သားသမီးတွေနဲ့ ခရီးထွက်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်
ဘယ်သွားသွား အပါခေါ်လို့ရတယ်။ ကြီးသွားရင်တော့
လိုင်းမတူဘူးဆိုပြီး နေခဲ့ရေား)
Hi Ko NyiLinThit,
nice to read your post.I am also love travelling and will definitely contact you when I come there. Please guide us asatour guide.
ရေတံခွန်ဖက်ကို မတက်ခင်မှာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ကော်ဖီသောက်ချင်လိုက်တာနော်။
တိုးရစ်ဂိုက် လုပ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်လေးကိုတော့ လေးစားသွားပြီ။ ပိုက်ဆံ စုလိုက်ဦးမယ်နော်.. bro.
နိုင်ငံလှလှက လူလှလှလေး လာလည်ဖြစ်ရင် ကြေးနန်းစာ ပို့လိုက်မယ် သွားစရိတ် လာစရိတ် နေစရိတ် အားလုံး ဖရီးပေးနော့်း) ညီအစ်ကိုတွေပဲဗျ ဂလောက်တော့ ဖြစ်တယ်ဟုတ် ။
လာလည်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အပြောလေးနဲ့တင် ကျေနပ်ပါပြီလေ စိတ်ကူးထဲ သွားလည်လိုက်တာရတာပဲ အစ်ကို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် အားကျတယ် သဘာဝအလှတွေ လတ်ဆတ်တဲ့လေနုအေးတွေကို ထိတွေ့ရှူရှိုက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကလည်း လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ခက်နေတာပါပဲ ။
အစ်ကိုလည်း ခရီးများများသွားဖြစ်ပါစေဗျာ ဒါမှ ကျနော်တို့လည်း ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ခရီးလိုက်ထွက်လို့ရတာပေ့ါ ။
သဘာဝတရားရဲ့ အလှအပတွေ အားလုံးကို နှစ်သက် သဘောကျမိတယ်။
မြို့ကြီးပြကြီးတွေကို မသွားချင်ဘဲ ခုလို ရှုခင်းလှလှ ကျေးလက် သဘာဝဆန်ဆန် ပကာသနမရှိတဲ့နေရာတွေကို သွားချင်တာ
ကိုညီရိုက်ထားတဲ့ ရှုခင်းတွေတအားလှတယ်... ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလည်ပြီး တောင်တက်လျှောက်သွားရတာသဘောကျတယ်။ သိပ်မကြမ်းတဲ့တောင်မျိုးပေါ့။ အဲဒီကကလေးတွေ တော်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်နော်။ ဗမာပြည်က ကလေးတွေနည်းနည်းမှ လမ်းမလျှောက်နိုင်ကြဘူး။ အားကစားလုံးဝမရှိဘူးလေ။
အမြဲနေဖို့တော့ မြို့ကြီးနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ မြို့ကြီးပတ်ဝန်းကျင်မြို့ပြင်ကတိတ်ဆိတ်တဲ့ရွာ ငယ်လေး...အဲဒီလိုသဘောကျတယ်။ဒါပေမယ့် တောထဲမှာတအိမ်တည်းဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင် တော့ကြောက်တယ်။
သူကတော့ကျမနဲ့ဆို တန်ဒမ်ပဲစီးချင်တယ်တဲ့။ တဘီးစီဆိုကျမကိုပဲစောင့်နေရလို့တဲ့လေ :P
လာပါ့ရှင်။ ဗမာတွေသောက်သောက်လဲ အခုဆို ဗမာတွေ(သိတဲ့အတိုင်း ဘယ်ကပိုက်ဆံရမှန်းမသိတဲ့ လူတွေပါ။)ရဲ့တားဂက်က ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ ကိုရီးယားတဲ့။ နွေရာသီဆို လာကြ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ကြနဲ့ ဟုတ်လို့။ ကိုယ်တွေတောင် စဉ်းစားမိတယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ က ဘယ်လိုမျိုးများပိုက်ဆံတွေရှိလာကြပါလိမ့်လို့။ လူတွေဆင်းရဲတယ်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးတယ်သာပြောတယ် ရှော့ပင်းမောလ်တွေမှာလဲ လူတွေပြည့်လို့။ ဘယ်လောက်လဲဆို အခုနွေရာသီဆို ငါကတော့ ငါ့သားကို ယူကေမှာ ဆမ်းမားစကူးလ် တက်ခိုင်းလိုက်တာ၊ ငါသမီးလေးကိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံ ကိုပို့ပြီးလည်ခိုင်းလိုက်တာ ဆိုတာတွေနဲ့ အချင်းချင်း ပြိုင်နေကြတာ။ တကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ ငွေတွင်းက နက်သထက်နက်ပေါ့လေ။ အဲလိုပဲ စင်ကာပူက ဗမာတွေကလဲ အခုဆို ယူရုပ်ပ်ကိုပဲ အပြိုင်အဆိုင် လည်ပြီး ကြွားစရာလိုလုပ်နေကြတော့တာ။
သားသမီးတွေ ကြီးလာရင် မိဘနဲ့ မလိုက်ချင်တာတော့ အမှန်ပဲဗျို့၊ မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ ကလေးတွေ ၁၃-၁၄ နှစ် လောက် ဆိုရင်ပဲ ခရီးအတူ မထွက်ချင်တော့ဘူး..၊
Ma Jasmine ...
Sure..!!! Please do come and let me know!
အဲဒီဆိုင်ကတော့ ကော်ဖီတကယ် ကောင်းတယ်ဗျ..၊း)
များများသာစုဗျို့..၊ ဒီဂိုက်က ဈေးကြီးတယ်..ဟားဟား၊
ကျနော်လည်း ထီတွေ လှမ့်ထိုးမှပဲနဲ့ တူတယ်ဗျ၊ ဒါမှ ထီပေါက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို Airbus A380 စင်းလုံး ငှားပြီး ဖိတ်လို့ရမှာ...၊းD
အေးအေးဆေးဆေး ထွက်ရတဲ့ ခရီးတိုင်းဟာ အမြဲလိုလို ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတယ်နော်..၊
လာသာ လာပါဗျာ၊ ကျနော် တတ်နိုင်တာ ကူညီပါ့မယ်။
ဟုတ်တယ်နော်၊ တချို့ကလေးတွေ အတော် လမ်းလျှောက်နိုင်ကြတယ်၊ အလေ့အကျင့်ပဲ ထင်ပါရဲ့၊ အိမ်နေရာ ရွေးတာမှာ ကျနော်တို့ တွေးပုံချင်းတော့ တူနေပြီဗျို့၊ ကျနော်လည်း မြို့လေးတစ်ခုနဲ့ မနီးမဝေး မှာနေရတာ ကြိုက်တယ်၊ မစူးနွယ်ရဲ့ “သူ”က စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ “မောတော့မောတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် မမောဘူး” သီချင်းထဲလို ဖြစ်ချင်လို့ နေမှာပါဗျာ၊းD
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလို လာလည်ကြတဲ့ လူအချို့ အကြောင်း ကျနော်လည်း ကြားဖူးတယ်ဗျ၊ ငွေကို ရေလိုသုံးနေကြတဲ့ လူတွေအဖို့တော့ ဒီနိုင်ငံတွေကို အကြိမ်ကြိမ်လည်ဖို့ အလွယ်လေးပါပဲ၊ ကျနော့်ရဲ့ ဆန္ဒမှန်က လက်တဆုပ်စာတင် မဟုတ်တဲ့ လူအများစု ကို လည်စေချင်တာပါ..။
ကော်ဖီကောင်းကောင်းရတဲ့ ဆိုင်လေး တွေ့သွားပြီဆိုတော့ ဝမ်းသာသွားတယ်။
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း ရှုခင်းကောင်းကောင်း နောက်ခံနဲ့ သားသားပုံ အနီးကပ်လှလှလေး တစ်ပုံလောက် တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ;)
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ကို (ကို)တပ်မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ။ အကို့ထက် အသက်ရော ဝါရော (Single) ငယ်ပါတယ်ဗျာ။
I've same wish like you for our common people(more than fistful tourists)whenever i saw buses of asian tourists around3leg chair of UN square.Anyway thanks again for sharing.I accompany with your trip by reading the post.Family went trip together 10 years ago but as baby taster said now.
သိန်းတထောင် ပေါက်ရင်တော့ ဂိုက်လုပ်ဖို့သာပြင်ထားပေတော့
ဂိုက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် .. ထီမပေါက်သေးတာက ခက်တယ် ..
ခုနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယ က လူတွေ ပိုချမ်းသာလာပုံရတယ် ကျမတို့ နိုင်ဂါရာရေတံခွန်ဆီ သွားလည်တုန်းကလည်း လာသမျှ တိုးရစ်စ်ထဲမှာ အဲက လူတွေ တော်တော်လေးတွေ့ရတယ်
လာချင်တယ် တိုးဂိုက်လုပ်ပေးမယ်ပြောလို့..... :P
ပို့စ်ဖတ်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတာနဲ့တင် စိတ်ချမ်းမြေ့ရတယ်နော်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ သားလေးကြီးရင်တော့ လက်ခံမယ်ဆိုရင် ဟုမ်းမ်စတေး နဲ့သွားလည်ခိုင်းမယ်။
ပထမတစ်ငုံကောင်းရင် ဂွပ်ဂွပ်ဆိုပြီး အားရပါးရသောက်တယ်။
ဒုတိယတစ်ခွက်မှာတစ်ငုံချင်း လည်ချောင်းကို ရှင်းစေတယ်။
ပြောဖို့မေ့သွားတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ သားလေးက ပျော်မပျော်တော့ မသိဘူး ပုံတိုင်းပြုံးနေတာပဲ။
လိပ်စာပေး ၊ ဒီနွေကျောင်းပိတ်ရက် သြဂုတ် လထဲမှာ ဆွစ် (Zürich )ကိုလာဘို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဒိတ်ထားတယ် ။ ထွက်မပြေးကြေး ။
တော်တော်လှတဲ့နေရာပဲဗျနော်။ လူမရောက်ဖူးချင်နေပါဗျာ.. ကင်မရာလေးပို့လိုက်ပါရစေ.:P
အေးဗျာ၊ ကျနော်လည်း အဲဒီတော့မှ ကော်ဖီကောင်းကောင်း သောက်ရတော့တယ်၊ သားပုံတွေ တင်ပေးပါ့မယ်..၊
ဟုတ်တယ်နော်၊ အထူးသဖြင့် အာရှကလာတဲ့ တိုးရစ်စ် တွေတွေ့ရင် မြန်မာတွေလည်း ဒီလိုလည်နိုင်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး ဝင်လာတတ်တယ်..၊
သိန်းတထောင် ဆိုရင်တော့ ဂိုက်လုပ်ခကိုလည်း မြှင့်ရတော့မှာပဲ....၊း)
လုပ်တော့လေ..၊ ကံထမ်းလာတာ မမြင်ရဘူး-ဆိုလား လမ်းထဲမှာ ထီသည်တွေ လာ,လာအော်တာ ကြားဖူးတာ ပဲ..၊းD
အာ..မပြောပါဘူး၊ စိတ်သာချ..၊ ကံထူးရှင်ကို ကပ်စား.. အဲ.. ဧည့်ဝတ်ကြေဖို့ ကြိုးစားရမှာပေါ့၊း)
ဟုတ်တယ်၊ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖိန့်..အဲ.. သိသလောက် ပြောပြချင်ရုံ သက်သက်ပါ၊း)
ဟုတ်ကဲ့..၊ ကြိုပြောတော့ တွေ့လို့ရတာပေါ့၊ ဘာမှလည်း မဝေးပါဘူး၊
ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လူတွေအတွက် ဒီလောက်တော့ ဈေးကြီးပုံ မရပါဘူး၊ ဒီမှာ ဂျပန်ဧည့်သည်တွေ တချိန်လုံး တွေ့နေရတာပဲ၊း) သားက သူ့အမေနဲ့အဖေ ကိုလည်း အတူပါစေချင်မှာပေါ့၊ ကော်ဖီသောက်နည်း မှတ်လိုက်ပြီဗျို့၊ နှစ်ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတဲ့ နည်းပဲ၊း)
သြဂုတ်လ.. ဟုတ်လား၊ အိုကေ.. ဘယ်အချိန် ပုန်းနေရ မလဲ သိသွားပြီ..ဟားဟား၊ နောက်တာပါဗျာ၊ Zurich ရောက်မှတော့ Lausanne ဖက်ကိုပါ လာခဲ့လေ၊ နဲနဲလေး ရက်ကြိုသိနိုင်ရင် အဆင်ပြေတာပေါ့၊
ကင်မရာလေး ပို့လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတော့ သဘောကျ သွားပြီဗျို့၊ လူလည်း မရောက်နိုင်စရာ မရှိပါဘူးဗျာ၊ တနေ့နေ့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။
ကိုယ်တိုင် အဲ့ခရီးရောက်သွားသလိုပဲ ဗျာ စာနဲ့ပုံနဲ့ တွဲပြီး ဖတ်လိုက်ရတော့ စာဖတ်ရင်း လမ်းလျှောက်နေသလိုပဲ .း) ကျေးဇူးဗျာ .. ခုလိုတွေ တင်ပေးတော့ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့ဗျာ ..
နှစ်သက်တာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဗျာ..။
ကြည်နူးစရာ ခရီးစဉ်လေး ဖြစ်ခဲ့ရမယ် ထင်ပါတယ်.
အဆင်ပြေသလို လာသာလာပါ ညီမရေ့...၊ ကွန်မန့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...။